Somali Haysata Fiisaha Iyo Aqoonsiga Maraykanka Oo Ku Xaniban Kenya, Ethiopia Iyo Koonfur Afrika.
Ugu yaraan 10 Muwaadiniin Somali haysata Fiisaha iyo Kaarka Cagaaran ayaa shalay ka dhoofay magaalladda Muqdisho, iyagoo ku sii jeeda Maraykanka
Tan iyo markii Amarkii Madaxweynaha Maraykanka la laalay, waxay Soomaali badan oo haysata Fiisaha iyo Kaarka US Green Cards weli ku xayiran yihiin Garoomadda qaar ka mid ah dalalka Afrika.
Ugu yaraan 10 Muwaadiniin Somali haysata Fiisaha iyo Kaarka Cagaaran ayaa shalay ka dhoofay magaalladda Muqdisho, iyagoo ku sii jeeda Maraykanka, inkastoo ay Transit ku sii yihiin Garoonka magaalladda Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta.
Sarkaal ka tirsan Waaxda Socdaalka iyo Jinsiyadaha ee Somalia ayaa u sheegay Wakaalladda Wararka Turkiga ee Anadolu in maanta oo Isniin ah la filayo inay in ka badan 20-kale oo Somali ah maanta ka dhoofi doonaan Muqdisho, iyagoo ku sii jeeda Maraykanka.
Mid ka mid ah Rakaabka oo magaceeda ku soo koobtay Asma ayaa u sheegtay Wakaalladda Wararka Anadolu inay ku hawlan yihiin nasiibkooda, si ay u gaaraan Maraykanka.
Shirkadda Turkish Airlines oo ah Shirkadda Caalamiga ee keliya ee isaga kala gooshta Muqdisho ilaa Istanbuul ayaa fududeynaysa sidii ay Rakaabka ugu sahli lahaayeen Duullimaadka ay ugu sii jeedaan Maraykanka.
Dhinaca kale, Shirkadaha Diyaaradaha Kenyan iyo Ethiopian Airlines ayaa u diidan Muwaadiniinta Soomaalida safarka ay ugu sii jeedaan Maraykanka.
Sarkaal sare oo ka tirsan Hay’adda maamusha Garoomadda Diyaaradaha Kenya ayaa sheegay in Soomaalida ku sugan Kenya ee doonaya inay u socdaalaan Maraykanka dib looga celinayo Garoonka.
Sarkaalkaasi waxa uu sheegay inay mar kasta dhacdo arrintaasi, iyadoo Xayiraadda Maraykanka horey looga qaaday dadka ka soo jeeda Somalia, Sudan, Syria, Yemen, Libya, Iraq iyo Iran.
Sidoo kale, Saraakiisha Garoomadda ku yaalla Ethiopia ayaa u sheegay dadka Soomaalida ee ku sii jeeda Maraykanka inay weli Dowladda ka sugayaan amar dadka ka soo jeeda Somalia iyo Sudan loogu oggolaanayo inay raacaan Diyaaradaha ku sii jeeda Maraykanka.
Inta badan Soomaalida haysatay Fiisaha iyo Green Cards-ka Maraykanka ee joogtay Ethiopia waxay u dhoofeen magaalladda Johannesburg ee dalka Maraykanka, iyadoo qaar ka mid ah sii raaceen Duullimaadyo ku sii jeeday Maraykanka, halka kuwo kalena ay Safar-sugayaal yihiin.
Si kastaba h ahaatee, U-qeybsanaha Safaaradda Somalia ee dalka Koonfur Afrika ugu qaabilsan Arrimaha Dhaqanka, Cabdi Xalane Xersi kuma baraarugsana inay Soomaali wadata Aqoonsiga Muwaadinimadda Maraykanka ee Green Cards-ka ku xayiran yihiin gudaha dalka Koonfur Afrika.